आज बढ्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति पुग्यो त ? हेर्नुस् – Ap Nepal
आज बढ्यो सुनको मुल्य, तोलामा कति पुग्यो त ? हेर्नुस्
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य ३ सय रुपैँयाले बढेको छ । हिजो (बुधबार) प्रतितोला रु ९० हजार ५ सयमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मुल्य आज भने रु ३ सयले बढेर प्रतितोला रु ९० हजार ८ सय कायम भएको छ ।
त्यस्तै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तेजावी सुनको मुल्य आज प्रतितोला रु ९० हजार ३ सय कायम गरिएको छ । चाँदीको मुल्य तोलामा रु १३१५ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि.. आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ बिनिमय दर …. नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
Prevशव बोक्ने गाडी नपाएपछि मोटरसाइकलमा ला’स हालेर लग्दै छोरा र ज्वाइँ (भिडियो सहित)
Nextकोरोनाका कारण नेपालमा आज यति धेरै संक्रमितले ज्यान गुमा ए [ संख्या सहित]